Ny sarin'ny masoandro miposaka dia mamorona sary marindrano ho an'ny "Ford v Ferrari" - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny sarin'ny masoandro miposaka dia manamboatra sary famantarana ho an'ny fiara "Ford v Ferrari"
Ny sarin'ny masoandro miposaka dia manamboatra sary famantarana ho an'ny fiara "Ford v Ferrari"
Mamokatra sary misy ny tena sary ny Daytona International Speedway sy ny vahoaka be mpankafy avy amin'ny hazakazaka maody any 1966.
Adelaide, South Australia- Ny Rising Sun Pictures dia nanampy tamin'ny famoronana indray ny iray amin'ireo hetsika mahavariana indrindra teo amin'ny tantaran'ny fifaninanana fiara Ford v Ferrari, ilay sarimihetsika vaovao avy amin'ny 20th Fox Century sy talen'ny James Mangold. Ny studio dia namoaka ny valim-pifidianana hita maso 223 ho an'ny sarimihetsika, ny ankamaroany ho an'ny andiany 8 minitra iray mampiseho ny hazakazaka "24 Ora Daytona" voalohany ao amin'ny 1966. Ny artista dia namorona sary an-tsary nomerika azo itokisana ara-tantara amin'ny làlambe malaza ary nameno azy ireo mpankafy.
Iray amin'ireo horonantsary andrasana indrindra amin'ity taona ity, i Ford v Ferrari dia nahazo aingam-panahy ny tantaran'ny mpamorona fiara Amerikanina fahitana fahitana an'i Carroll Shelby (Matt Damon) ary mpamily ilay anglisy teraka tany Ken Miles (Christian Bale) izay tsy natahotra akory, izay niara-niady tamin'ny fidiran'ny orinasa, ny lalàna. momba ny fizika, ary ny demoniany manokana hanamboatra fiara mihazakazaka revolisionera ho an'ny orinasa Ford Motor ary haka ireo fiaran'ny hazakazaka manohana an'i Enzo Ferrari ao amin'ny 24 Hours of Le Mans any Frantsa ao 1966.
Niasa teo ambany fitarihan'i Mangold, mpiandraikitra ny famokarana VFX Olivier Dumont ary mpamokatra VFX Kathy Siegel, ny RSP dia nanatanteraka asa iraisana sy vahoaka ho an'ny andiam-pandehanana lavitra ao amin'ny Daytona International Speedway. Ny artista dia nesorina tamin'ny alàlan'ny horonantsary famokarana (voatifitra tao amin'ny Auto Club Speedway any Kalifornia) ary nosoloiny sary nomerika tamin'ny zafikelin'i Daytona sy ny tontolo manodidina azy raha nipoitra nandritra ny hetsika antoandro tao 1966. Nipetrahan'izy ireo ihany koa ny toerana nijerena ireo mpijery nomerika an'hetsiny ary nampitombo fanatsarana hafa mba hanampiana amin'ny famerenana ny fijery sy ny hamafin'ny hazakazaka.
"I James Mangold dia nanizingizina ny tsy hivadika amin'ny zava-misy ara-tantara amin'ny lafiny fijerena ny hazakazaka ary ny fomba nisehoan'ny zava-nitranga tamin'iny andro iny", hoy ny fanamarihan'ny mpiandraikitra RSP VFX Malte Sarnes. "Ny fanamby ho anay dia ny fananganana modely marina amin'ny habetsaky ny habetsahana ary fenoy ny olona toa tsy azo itokisana ary manao hetsika manokana ho valin'ny zava-mitranga ao amin'ilay hazakazaka."
Ny fandalinana ny hazakazaka dia tsy vitan'ny hoe nahagaga sy nahatsiravina ara-teknika, fa tonga ihany koa izy io. "Manana tantaran'ny fiaraha-miasa mahomby isika miaraka amin'ny 20th Century Fox ary fanta-daza amin'ny fandefasana ireo fampitana ara-tsarimihetsika mamorona ara-potoana," hoy i Gill Howe, mpamokatra ekipa RSP. "I Ford V Ferrari dia tsy nisy dikany. Amin'ny maha-mpiara-miasa famoronana azo itokisana, toy ny mahazatra, izahay dia nanolotra ny asa avo indrindra amin'ny lafiny fahitana momba ny fahasarotana sy ny tsy miovaova, ao anatin'ny fe-potoana iantsoana azy ireo. ”
Nandalina ny horonantsary arivan'ny hazakazaka "24 Hours of Daytona" ary ny sary ara-tantara sy ny sary vita amin'ny maritrano mba hamoahana maodely amin'ny làlam-pandehanana be dia be, izay nosokafana tao amin'ny 1959. Ny antsipiriany ao anatin'izany ny boaty an-gazety, tohatra, faneva ary saina, hatramin'ny lokon'ny seza dia noforonina mba hanehoana ny tena zavakanto tamin'ny toerana hazakazaka tamin'io andro io. "Ity sarimihetsika ity dia ho hitan'ny mpankafy hazakazaka matin'ny ankamaroany", hoy ny nomen'ny 2D mpitarika an'i Matt Greig. "Raha misy tsy marina dia ho voamarika."
Ny ekipa dia namorona fiakaran'ny fiara 3D izay nandray anjara tamin'ny hazakazaka ary nampiasa azy ireo ho famatsiana fiara hazakazaka ao anatin'ilay rakitsary famokarana. Miantehitra indray amin'ny sary ara-tantara, ny mpanakanto dia namorona modely nomerika izay nifanentana tamin'ny mpifanolobodirindrina aminy tena izy, nidina tamin'ny fanapaha-kevitry ny firazanany, ary namorona azy ireo ho sehatra nifanaraka tamin'ny toerany ao amin'ilay hazakazaka tena izy.
Ny fikarakarana mitovy amin'izany dia natao mba hahatonga ny mpijery nomerika mijery sy hitondra tena toy ny nataon'ilay vondron'olona tena izy 60 taona lasa izay. Anisan'ireny ny fanamarihan'i Sarnes, ny valalabemandry marobe mba hifanaraka amin'ny endrika demografika tamin'ny fotoan'androny (ny mpanatrika amin'ny hazakazaka amin'ny hazakazaka matetika dia lehilahy Caucasian indrindra). "Nandalina ny fandaharana sy ny fihetsik'olom-be izahay tamin'ny hetsika hazakazaka 24 lehibe", hoy izy. "Amin'ny ankapobeny dia misy olona maro amin'ny lafiny antoandro fa tsy amin'ny alina ary, rehefa mafana ny andro, dia mirona mivory eo amin'ny faritra mangatsiaka izy ireo. Ny ataon'ireo mpisehatra nomerika dia maka tahaka ireo modely ireo. ”
Ny BG Mpanolotsaina CG David Bemi dia manampy fa ny mpijery nomerika dia miankina manokana amin'ny avo lenta. Ny sasany dia mifoka sigara. Ny hafa kosa manana fakantsary fehezin'izy ireo manodidina ny tendany. "Ny maodely dia nanao asa mahasoa tamin'ny famoronana endri-tsoratra nomerika izay mifanaraka amin'ny fomba", hoy ny nomarihiny. "Nampiasa fandrika izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy hita taratra ny akanjo satria ny akanjo amin'ny ankapobeny no nitafy lamba vita tamin'ny tany, fa tsy ny fitaovana vita amin'ny artifisialy izay tian'ny olona ankehitriny."
Notsaboina koa ny vahoaka hamaly ireo fisehoan-javatra teo an-dàlana, naneho ny fahatafintohinana teo akaikin'ny fifandonana ary nampientam-po tamin'ny fotoana nipoiran'ny filalaovana avo. "Rehefa mihalehibe ilay hazakazaka dia mihamangatsiaka hatrany izany ary hita taratra ao am-pon'ny olona izany fahatsapana izany", hoy ny fanazavan'ilay Mpanolotsaina CG, Noah Vice. "Tao anatin'ireo tifitra lehibe indrindra anay dia nanana mpiasan'ny 45,000 nanodidina izahay ary nifehy ny fihetsik'izy ireo tamin'ny fihodinana fototra 30. Mba hanampiana ny tena zava-misy, ny olona sasany, toy ireo mpiambina ireo akaiky, dia mifototra amin'ny alàlan'ny valin-kevitra avy amin'ilay talen-kevitra. ”
Ny fikolokoloana dia noraisina mba tsy hahalasa ny endri-tsoratra nomerika tsy ho voan-artifika amin'ny alàlan'ny endrika ho fantatra. "Niasa mafy izahay mba hiantohana ny fahabetsahan'ny olona sy ny fiovan'ny fihetsik'izy ireo," hoy i Vice. “Tamin'ity andiany ity, dia tianay ny hifantohan'ny mpihaino amin'ilay hazakazaka. Ilaina ny maharesy lahatra ary manampy amin'ny habakabaka tsy manala ny tantara. ”
Niasa mba hampiditra ny haino aman-jery nomerika miaraka amina fitaovana velona ny ampahany, amin'ny ampahany amin'ny fampitahana ny hazavana sy ny fandanjalanjana loko. "Ny sary fototra dia manana endrika tsara vidy," hoy i Grieg. “Nitifitra anamorphic izy io ary manana kalitao malefaka ahitàna lesoka. Ny fananana nomerika dia mila mitovitovy amin'izany ihany mba hampifangaro azy amin'ny fomba tsy mihetsika. Nila ezaka be dia be mba hahatratrarana tsara izany. ”
“Ny Fanilo Jiro, Mathew Mackereth, dia namolavola rafitra hamoronana ny hazavana fanoratana ifotony mampiasa ny halavola sy ny halehiben'ny toerana nitifirana ary nesongany ny timecode teo amin'ireo takelaka. Io no nanome ny fototra ho entinay miorina, ahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny jiro famoronana ilaina mba hahatratrarana ireo tifitra efa vita. ”
Ny RSP dia nanolotra singa mitovy amin'ny andiany hafa amin'ny horonan-tsarimihetsika tao amin'ny fifaninanana Willow Springs any amin'ny tany Mojave, izay nanandratan'i Shelby sy Miles ny diany hazakazaka vaovao. Tamin'io fotoana io, ny ampahany mivantana amin'ilay sehatra dia voatifitra tamin'ny lalana Willow Springs. Na izany aza, ny ankabeazan'ny fototra dia tsy maintsy novaina na nosoloana fanesorana ireo endri-javatra maoderina ary hanonerana ny lafiny amin'ny fiovana izay niova nandritra ny ampolo taona lasa.
"Ny tanjonay dia ny fametrahana olona marobe ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary hameno ny faritra misy ny lavaka miaraka amin'ireo sambo sy ny fiara mandritra ny fotoana", hoy i Greig. "Izany no tanteraka tamin'ny fananganana sary hosodoko 2 ½-D. Tsy maintsy amboarina manerana ny andiany ireo projection satria mandritra ny ora maromaro, manomboka amin'ny mitataovovonana rehefa somary avo ny lanitra hatramin'ny tolakandro. ”
RSP dia nahavita ny andaniny roa latsaky ny telo volana. Alexandra Daunt Watney, mpamokatra VFX dia nilaza fa ny fahombiazana haingana dia mila fandaminana mitandrina. "Nanatanteraka drafitra izahay sy ny Mpanolotsaina VFX talohan'ny nahatongavan'ireo singa famokarana," hoy ny tsaroany. “Tianay ny manome antoka fa manana ny harena ara-batana sy ny olombelona izahay. Fantatray ihany koa ny tifitra sarotra indrindra ka nahafahan'ireo ekipa nametraka azy ireo tany am-boalohany ary nanome ny sisa tavela ny asa ho ao anaty fonosana misy saina. ”
Ny drafitra maloto fotsiny dia tsy nitazona ny ekipa fotsiny, izay nahafahanay nanolotra valiny maharesy lahatra. "Ny departemanta isan-tsokajiny dia niasa tamin'ny fiaraha-miasa mafy mba hitazomana hatrany ny fandrosoana rehetra," hoy i Sarnes. “Izany no nahafahanay nohazonina tsara indrindra sy nampiditra ny fampidirana famoronana avy amin'i James Mangold sy ny ekipany hatramin'ny farany teo. Ny valiny dia fifaninanana hazakazaka mifono ara-tantara ary mampientam-po hijery. ”
Ford v Ferrari fampahalalana fanampiny:
Sarimihetsika miaraka amin'ny kintana Ford Ford, Ferrari Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Taratasy Tracy, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone ary Ray McKinnon.
Ford v Ferrari dia nosoratan'i Jezir & John-Henry Butterworth sy Jason Keller. Novokarin'i Peter Chernin pga, Jeno Topping pga ary i James Mangold, pga
Ao amin'ny Rising Sun Pictures (RSP) dia mamorona vokatra ara-tsindrimandry ho an'ny fianarana lehibe manerantany. Ny trano fiantsonay dia tranonay mpanakanto mahay miavaka izay miara-miasa mba hamoahana sary tsy mampino. Ny fifantohana amin'ny famokarana ny kalitao avo indrindra sy ny vahaolana azo itokisana, ny RSP dia manana fomba amam-panafahana mahazatra indrindra, izay ahafahan'ny orinasa mandanjalanja haingana ary manitsy ny volavolan-dalany mba hihaona amin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpijery amin'ny sary lehibe.
Ny studio dia mankafy ny tombony raha misy any Adelaide, Australia Australia, iray amin'ireo tanàn-dehibe indrindra eto an-tany. Izany, miaraka amin'ny lazantsika tsara sy ny fidirana amin'ny iray amin'ireo rehetran'ny lehibe sy azo itokisana, dia mahatonga an'i RSP ho magnet ho an'ny mpamorona sarimihetsika eran'izao tontolo izao. Izany dia nanosika anay hanohy fahombiazana ary nahafahan'ny RSP mandray anjara amin'ny tetikasa isan-karazany ao anatin'izany ny Spider-Man: lavitra ny trano, X-Men: Dark Phoenix, Kapiteny Marvel, Dumbo, Predator, Tomb Raider, Peter Rabbit, World World, Thor : Ragnarok, Logan, Pan, ny franketra X-Men ary Lalao of Thrones.
Goldcrest Post dia mamelona ny feon'i New York ao amin'ny Sixties amin'ny Epic Limeo Epicime Crime Series "Rain'i Harlem" - Desambra 12, 2019
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Spears & Arrows THE COLONIE / Chicago TVU Networks Visual Effects	2019-11-25
Previous: Frame.io dia manangana Series C $ 50M C ho an'ny famerenam-bokatra Video Video
Next: Sam Daley, ny akanjo avy any New York, mitondra ny fifangaroan-doko marevaka amin'ny “Andro mahafinaritra ao amin'ny mpifanolobodirindrina”